Daawo:- Gaarigii Wasiir Cabaas iyo dayacaada amni ee wasiirada haysata - Hablaha Media Network
Daawo:- Gaarigii Wasiir Cabaas iyo dayacaada amni ee wasiirada haysata
HMN:- Qubaro dhinaca ammaanka iyo xubno xilal horay u soo qabtay ayaa su’aal ka keenaya sida xilligan u dayacan yihiin qaar ka mid ah Wasiirada Xukuumadda Ra’iisul Wasaare Kheyre.
Dhacdadii xalay ee lagu dilay Wasiirkii Howlaha Guud iyo Guriyeynta ayaa waxay banaanka keeneysa, sida aysan Xukuumadda iyo dowladdaba isaga xil saarin amniga Wasiirada qaar.
Baaritaano horu dhac ah ayaa lagu ogaaday in 40% ay Wasiirada Xukuumadda uu amnigooda dayacan yahay, kuwaasoo aan laheyn ilaalo iyo gaadiid aan xabadaha karin.Hase ahaatee Wasiirada muhiimka ee Xukuumadda ayaa waxaa lagu ilaaliyaa gaadiid ciidan iyo baabuurta aan xabadaha karin, waana arrin dad badan la yaaban yihiin sida Wasiirada Xukuumadda ay naftooda u kala qaalisan tahay.
Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa qaadaya mas’uuliyada koowaad ee Amniga Wasiiradiisa, waxaana dad badan ay sheegayaan in dhacdadii xalay lagu rasaaseeyay Wasiirka ay badbaadin laheyd hadii uu wadan lahaa gaari aan xabadaha karin, iyadoo Wasiirka uu watay gaari yar oo kuwa raaxada ah oo loo yaqaano Harier.Xildhibaanada Baarlamaanka iyo Wasiiro hore ayaa iyana ka mid ah kuwa leh baabuurta aan xabadaha karin, waxaana qaarkood la sheegaa in baabuurta ay wataan yihiin kuwo ka dhaxlay Wasaaradihii ay xilalka ka hayeen.
Mas’uuliyada koowaad ee baaritaanka dilkii xalay wuxuu lugaha la geli doonaa sida uu u dayacnaa Amniga Wasiirka iyo waddooyinka Muqdisho oo leh halisteeda amni inuu isaga dhex wato baabuur yar iyo hal askari.
Si kastaba ha ahaatee Wasiir CabaadsSiraaji ayaa noqonaya Wasiirkii u horeeyay ee la dilo Xukuumadda Kheyre, isla markaana ku dhinta shil dowladda dhexdeeda ah, waxaa uu ahaa nin dhalinyaro ah oo horay ugu soo koray xeryaha qaxootiga Kenya, kuna soo waxbartay, waxaa uu lahaa mustaqbal wanaagsan.
DAAWO WASIIRKA OO NOLOSHIISA KA HADLAYO